ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ बिल्कुलै बे’वास्ता नगर्नुहोला एक Share गर्नुस अ’धुरो काम बन्नेछ !!! – Nepal Online Khabar
भगवान शि’वले बनाएको एउटा अनौठो गुफा र त्यसबारे बारे कैयौ मा’न्यता प्रचलित छन् । भनिन्छ कि, जसले यो गुफाको सुरुङभित्र जाने कोसिस गर्यो त्यो व्य’क्ति फ’र्केर आउन सकेको छैन ।
भारतको जम्मु कास्मिरबाट लगभग १४० किलोमिटरको दुरीमा अ’वस्थित उधमपुर “क्षेत्रमा यो गुफा छ। शि’वखोडि नामले प’रिचित यो गुफा भ’गवान शि’वले नै बनाएको वि’श्वास ग रिन्छ। यस गुफामा भगवान शि’वको वास रहेको मा’न्यता रहिआएको छ।
शि’वखोडी प’ट्टीबाट छिर्दा यो सुरुङ अमरनाथ बर्फानी गएर टुङ्गिन्छ । प्रचलित मान्यता अनुसार द्वापरयुगमा साधुसन्त सुरुङ हुदै अमरना थको यात्रा गर्दथे । तर कलीयुगमा जसले यो गुफा हुदै अगाडि जाने प्र’यास गर्छ त्यो व्य’क्ति फिर्ता हुन पाउदैन भनिन्छ ।
हाल यो गुफा बन्द गरिएको छ ।यस गुफाभित्र रहेको शि’व लींग प्रा’कृतिक भएको जनवि’श्वास छ तीन मिटर उचाइ रहेको यस गुफाको लम्वाइ २०० मिटर लामो छ!यस गुफा भित्र नन्दीको मुर्ती, पार्वतीको मुर्ती, नाग लगायतका कैयौ प्रा’कृतिक व’स्तुहरु रहेका छन् ।
मा’न्यता अनुसार गुफा स्वयम भ’गवान शि’वले बनाएका हुन् ।प्र’चलित क’था अनुसार भस्मासुरले मन्त्र जपेर शि’वलाई खुसी पारेका थिए । त्यसपछि भस्मासुरले शि’वबाट यस्तो बर पाएका थिए कि, जसको शि’रमाथी हात राख्यो त्यो खरानी हुन्थ्यो !
यस्तो श’क्ति प्राप्त भएपछि भस्मासुरले भ’गवान शि’वलाई नै नाश गर्न चाहे यसपछि शि’व र भस्मासुर विच भि’षण यु’द्ध सुरु भयो यु’द्धपछि भस्मासुरले हार खाएनन् र भ’ग वान शि’व त्यहाबाट निक्लेर अग्लो पहाड चढे । र एउटा गुफा बनाएर त्यहाँ लुकेर बसे । जुन हाल पनि शि’वखोडि नामले प्र’चलित छ ।
मा’न्यताअनुसार भ’गवान शि’वलाइ बचाउन भगवान वि’ष्णुले एक सुन्दर “स्त्रीको रुप लिएका थिए । र भस्मासुरलाई आ’कर्षित गरेका थिए सुन्दर युवती देखेपछि भस्मासुर उतै आ’कर्षित भए र शि ‘वले दिएको श”क्ति त्यहि भुले । र आफ्नै शि’रमाथी हात राखेर भस्म भए ।
Prevनेपालमा भेटियो यस्तो अचम्म को गुफा गाईले पत्ता लगायो ,दर्शन गर्न सुतेरै पस्न र निस्कनुपर्ने पूरा पढेर ॐ लेखी शेर गरौ
Nextप्रमुख न्यायाधीशसमक्ष पेश भएपछि रिहा